19 / 05 / 2021 21 / 05 / 2021 ခရစ် Wharfe 190 Views စာ0မှတ်ချက် 10292 Friends Apartments, 21319 ဗဟို Perk, 76178 နေ့စဉ် Bugle, Chandler Bing, Friends, Ideas, Janice, ဂျို Tribbiani, Lego, Lego Friends, Lego Ideas, Lego မှ marvel, LEGO.com, Marvel, မော်နီကာ Geller, Ross Geller, စျေးဝယ်
ဒီတော့ဘယ်သူကမှဘဝဆိုတာဒီလိုဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့မင်းကိုပြောခဲ့တာကမင်းဟာမင်းအလုပ်ပြက်ရယ်၊ ကွဲသွားပြီ၊ ဒါပေမယ့်ဟေး၊ အနည်းဆုံးမင်းအခုဝယ်နိုင်တယ် Lego 10292 အဆိုပါ Friends Apartထံမှ LEGO.com.
၂ ဝ ၄၈၈ အပိုင်းအစကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည် 21319 ဗဟို Perk VIP အသင်းဝင်များအတွက်ယခုအခါ£ 134.99 / $ 149.99 / € 149.99 အတွက်သီးသန့်ရရှိနိုင်ပါသည်။ သငျသညျမှတက်လက်မှတ်ထိုးမထားဘူးဆိုရင် Lego Group ၏သစ္စာရှိမှုအစီအစဉ်ကိုသင်ကအခြားသူများနှင့်အတူ၎င်းကိုမှာယူရန်ဇွန်လ ၁ ရက်ကိုစောင့်ရမည်။
ကျေးဇူးတင်စရာအကြောင်းမရှိပါ မဟုတ် VIP အသင်းဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်ရန် - ၎င်းသည်အခမဲ့အသင်းဝင်ရန်ဖြစ်ပြီး၊ 10292 ကဲ့သို့သောအစောပိုင်းများကိုသင်စောစီးစွာရယူနိုင်ရုံသာမကဘဲ Friends Apartments (နှင့်လာမည့်အပတ်ကရဲ့ 76178 နေ့စဉ် Bugle) သင်သည်အနာဂတ်ဝယ်ယူမှုသို့မဟုတ်အထူးသီးသန့်ဆုများအတွက်သုံးစွဲရန်ရမှတ်များလည်းရလိမ့်မည်။
သင်မနိုင်လျှင် be သင်၏နောက်ဆုံးလက်ကျန် sitcom-based set တွင်သင်၏လက်ကိုရယူရန်၊ သင်၏ VIP အကောင့်သို့ sign up လုပ်ရန်နှင့်ထို order button ကိုနှိပ်ပါ။ သငျသညျသောအလုပ်ကိုထောကျပံ့နိုင်ပါတယ် Brick Fanatics ကျွန်တော်တို့ရဲ့သုံးပြီးသင့်ရဲ့မိတ္တူဝယ်ယူခြင်းအားဖြင့်ပါဘူး တွဲဖက်လင့်ခ်များ:
Joey နှင့် Chandler's ap တို့၏အပန်းဖြေမှုများနှင့်အတူartMonica နှင့်ရာခေလတို့၏ apartment, 10292 အဆိုပါ Friends Apartments (၇) ခုတွင်အဓိကဂိုဏ်းနှင့် Janice တို့ပါဝင်ပြီးပြပွဲ၏ရာသီ (၁၀) ခုလုံးကိုကိုးကားထားသည်။
ထိုအသေးစားဓာတ်ပုံများ၏နောက်ကွယ်ရှိတိကျသောလှုံ့ဆော်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ သင်ပိုမိုရှာဖွေနိုင်သည် ဒီနေရာမှာကိုနှိပ်ခြင်း။ Gladys နှင့်အစိမ်းရောင် Ottoman အပါအ ၀ င်အစုံ၏အကောင်းဆုံးကိုးကားချက်များကိုပိုမိုသိရှိရန် ဒီမှာသွား။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့် ၁၀၂၉၂ ၏ကျွန်ုပ်တို့၏အသေးစိတ်ပြန်လည်သုံးသပ်မှုကိုသင်စစ်ဆေးနိုင်သည် Friends Apartments ဒီမှာ.
← 76191 Infinity Gauntlet ကို LEGO.com တွင်ကြိုတင်မှာယူနိုင်သည်
ထိုနေ့၏အုတ်ပုံ: Stormtrooper Evolution →